Imizobo emangazayo eyenziwe ngetyuwa nguDino Tomic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imizobo emangalisayo eyenziwe ngetyuwa nguDino Tomic
I-Dino tomic, Igcisa le tattoo elinetalente elizinze eCroatia kodwa elihlala eNorway, liyathanda ukwenza imizobo eyiyo xa engabhali abathengi. Imizobo yakhe, nokuba ujika kwizinto ezoyikisayo, isayensi, okanye ukukhangela iimodeli eziyinyani, funa inkuthazo ngokubetha okumangalisayo.
Uhlobo Tom, ungumculi oselula ngokwentelekiso, uneengcebiso ezininzi kwabo bafuna ukuphucula izakhono zabo kubugcisa. "Eyona ndlela yokufunda kukukhuphela ezinye izifundo zomsebenzi". "Njengoko usenza ezo kopi, njl.njl. Uyakwenza esakho isitayile. Ufunda into enye kwigcisa kwaye emva koko, de upolishe isitayile sakho ». Nantsi i vidiyo kunye nezinye iziqwenga zemisebenzi yakhe, kwaye kamva a udliwano ndlebe Benze ntoni ngemisebenzi yabo?
Ungasichazela kancinane ngawe?
Igama lam ndinguDino Tomic kwaye ndazalelwa eCroatia, kodwa bendihlala eNorway ukusukela xa ndandineminyaka eli-14 ubudala. Ndinesidanga seBachelor of Arts, kwaye ndisebenza ngokusisigxina njengomculi we tattoo kwivenkile yam eNotodden, eNorway.
Uqale nini ukuzoba?
Ndihlala ndikuthanda ukuzoba, xa ndimncinci bendihlala ndibhala yonke into. Kodwa xa ndandineminyaka eli-16 ukuya ku-18 kulapho ndaqala khona ukugxila kubugcisa. Ukususela kuloo mzuzu andikaze ndibenosuku lokuba ndingazobi nto.
Uthotho lwemizobo yosapho luyinto entle. Yeyiphi imiceli mngeni ojamelana nayo xa usenza ezi ziqwenga?
Enkosi. Konke bekungumceli mngeni kwaye akukho ndlela ingcono yokubonisa izakhono zakho zokusebenza kwinqanaba elikhulu ngeepensile ezinemibala. Ndikhawuleze ndabona ukuba kuya kufuneka ndixube eminye imithombo yeendaba kwiprojekthi ukuyenza isebenze, njenge-acrylic kunye netshokhwe.
Zininzi iibugs, kodwa leyo yinxalenye emnandi yayo. Ufunda kwiimpazamo ozenzayo, kwaye uzisebenzisele inzuzo yakho.
Ucinga ntoni usapho lwakho ngemisebenzi yakho?
Kulungile ngumama notata kuphela ababonile. Ootatomkhulu noomakhulu bahlala eCroatia, ngenxa yoko abakabi nalo ithuba lokubabona. Okwangoku ndisebenza kumzobo wam omkhulu wokugqibela kwaye xa ugqibile ndiza kuzama ukubona ukuba ndingafumana igalari eCroatia ukuze ubabone.
Ngubani okanye yintoni okhuthaza umsebenzi wakho?
Ndinoluhlu olukhulu lwabaculi. Kodwa inkuthazo yokwenene ivela kukwazi ukuba amanye amagcisa asebenza nzima njengam. Nabani na owazi kakuhle umsebenzi wabo wobugcisa undinika inkuthazo. Ukujonga nje okwenziwa ngabantu kunye nokwazi ukuba lungakanani ulwazi kunye neminyaka yokusebenza nzima kuyo, kundinika inkuthazo enkulu.
Nguwuphi umsebenzi owuthandayo kwaye ngoba?
Andikwazi ukuthi yeyiphi endiyithandayo. Kodwa ezona ndizingca kakhulu ngazo yimifanekiso emikhulu yosapho endiyenzileyo. Kungokuthatha ixesha ukuba ndizigqibe, ndiziva ndinamathele kubo kwaye ndiziva ngathi ndinika yonke into endinayo, nangaphezulu ukubenza bagqibelele.
Ungamcebisa uthini umntu oqala ukuzoba?
Musa ukunikezela, kwaye uziqhelanise. Beka iinjongo kwaye ungaphazamiseki. Sebenzisa iYouTube, kukho iividiyo ezingaphezulu ngokwaneleyo zokuba ungafunda yonke into oyifunayo.
Ukwangumculi we tattoo. Ngaba kulula kuwe ukuba uguqulele imizobo yakho kwiitatoos?
Hayi, andiyenzi. Ulusu loluphakathi ekunzima kakhulu ukusebenza nalo, lunezithintelo ezininzi. Ndicinga ukuyeka umsebenzi wam wokuba ngumzobi we tattoo, ndigxile kwimizobo kunye nepeyinti.
Kumnandi, kodwa kufuneka ubenentlalontle ukuze usebenze kumzi mveliso we tattoo, kwaye ndiyayithanda indawo yam nenkululeko xa ndenza ubugcisa.
Likuphathele ntoni ikamva?
Ndineprojekthi yam elandelayo ecwangcisiweyo, endiyigcina iyimfihlo. Ke ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni le kuya kufuneka undilandele Facebook / Instagram / DeviantArt. Kodwa ndiza kuyithetha le nto kuphela, iyakuba yeyona projekthi inkulu kwaye inzima endiyenzileyo okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizobo emangalisayo eyenziwe ngetyuwa nguDino Tomic
I-resin ye-Keng lye eyiyo kunye ne-acrylic ekhethiweyo yeZilwanyana ze-3D
Amajoni omkhosi wokudlala we-Star Wars ophuculwe ngumntu nguCallahan